Faahfaahin kasoo baxayso Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee Gowr dhow ka dhacay Magaalladda Muqdisho.(Warbixin). - jornalizem
Faahfaahin kasoo baxayso Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee Gowr dhow ka dhacay Magaalladda Muqdisho.(Warbixin).
Warar dheeri ah oo naga soo gaaraya Agagaarka Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi uu waxyar ka hor ka dhacay Qarax goor xoogan ismiidaamin ah oo uu fuliyay Ruux naftiis halige ah oo watay gaari.
Qarax, ayaa waxa uu ka dhacay agaarka Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya, waxaana laga helayaa warar kala duwan, iyadoona iminka halkaasi laga maqlaayo Codka Rasaasta oo ay ridayaan Ciiddamadda Dowladda.
Kaso horjeedka Dugsiga Sare ee Banaadir ee degmada Hodan ayaa lasoo sheegaya inuu qaraxa ka dhacay halkaas oo la shegayo inay dagan yihiin meel ku dhaw Shaqaalaha Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya, waxaana agagaarkaasi iminka xiray Ciiddamadda Dowladda, iyadoona ay gaarayaan gawaarida Deb damiska iyo Ambalaska.
Waxan weli la saadalin Karin Waxyeelada Qaraxaasi ka dhashay, balse wararka qaar ayaa sheegaya in Weerarka ay ka bedbaaden dadkii loola dan lahaa waxaana ku waxyeeloobay Dad shacab ah.
Warar horu dhac ah, oo ay heshay Shabakadda ayaa sheegaya in ku dhawaad Shan Ruux ayaa ku geeriyootay dhaawacana intaasi wuu kasii badanyahay sida lasoo warinayo .
Weerarkaani ismiidaaminta aha ayaa waxa uu barbar socday weerar kaas lamid ah oo Saakay lagu qaaday Isgoyska Sanca ee degmada Yaaqsheed ee magaalda Muqdisho.